Sweden oo ku dhawaaqay inay Lacagta Kaalmada ka Jareyso Ururada Diimaha Hadii ay Sameeyaan Falkan
HomeWararka CaalamkaSweden oo ku dhawaaqay inay Lacagta Kaalmada ka Jareyso Ururada Diimaha Hadii ay Sameeyaan Falkan
Dawladdu waxay ku dhawaaqday in ay si weyn uga shaqaynayso dib u eegis lagu samaynayo shuruudaha dimuqraadiga ah ee deeqaha la siiyo ururada diinta, ka dib markii SVT ay baadhis ku samaysay in qaar ka mid ah culimada Shiicada ahi ay ka faa’iidaysteen “guur ku meel gaadh ah” si ay ugu fududaato iibsashada galmada.
“Waxaa jirta baahi loo qabo in la dhimo deeqaha la siiyo ururada ku lugta leh howlahan oo kale,” ayay tiri wasiirka sinnaanta jinsiga Eva Nordmark shalay, iyadoo raacisay, “Ururada ku xad-gudba qiyamka dimoqraadiyada ee Sweden waa inaysan helin gargaarka dowladda.”
Wasiirku waxa uu tixgeliyey waxa baadhista lagu ogaaday “ ganacsiga dadka,” isaga oo intaa ku daray in ay tahay wax laga yaqyaqsado oo sharci darro ah.
Ururka Taakulaynta Ururada Diimaha ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay ururo diimeedyo kala duwan u qaybiyeen lacag u dhaxaysa 80 ilaa 105 milyan oo karoon sanad walba , taaso ah deeqo urureed, hawlgelin iyo deeq mashruuc.
Ururada Shiicada ah ee Muslimiinta Sweden ayaa sanadkii hore ururkan ka helay lacag ka badan 3 milyan oo karoon.
Si ururada diintu ay u helaan kaalmada dawladda, waa inay buuxiyaan waxa loogu yeero “shuruudaha dimuqraadiyadda.” Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay inay gacan ka geystaan ​​ilaalinta qiyamka aasaasiga ah ee bulshada.